आफ्नै विद्यार्थीलाई ब’लात्कार गरेको आ’रोपमा एक शिक्षक प’क्राउ ! – Nepal Online Khabar
आफ्नै विद्यार्थीलाई ब’लात्कार गरेको आ’रोपमा एक शिक्षक प’क्राउ !
फागुण २३, २०७८ सोमबार 200
काठमाडौं : अर्घाखाँची जिल्लाको एक २७ वर्षका शिक्षक १५ वर्षकी आफ्नै विद्यार्थीलाई जङ्गलामा लगेर घरीघरी ब’लात्कार गरेको आ’रोपमा प’क्राउ परेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाचीले बि’ज्ञप्ति निकालेर ती शिक्षकले विद्यार्थीलाई जंगलमा लगी पटक-पटक ब’लात्कार गरेको खुलेको जनाएको छ । यद्यपि प्रहरीले प’क्राउ परेका शिक्षकको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रहरीका अनुसार प’क्राउ जिल्लाको मालारानी गाउँपालिकाको एक विद्यालयका २७ वर्षीय शिक्षक हुन् । उनले १५ वर्षीया आफ्नै विद्यार्थीलाई घर जनिकैको जङ्गलामा लगेर पटक-पटक ब’लात्कार गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
निज शिक्षकले घर नजिकैको जंगलमा लगेर ती विद्यार्थीलाई पहिलोपटक ज’बरजस्ती क’रणी गरेको र पछिल्लाे समय दैनिकजसाे ती १५ वर्षीया नाबालिका विद्यार्थीलाई ब’लात्कार गर्ने गरेकाे प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले निकालेको वि’ज्ञप्तिमा प’क्राउ परेका शिक्षकलाई अदालतमा ६ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ । पी’डितका परिवारले दिएको उ’जुरीका आधारमा पी’डक शिक्षलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
Prevरामकुमारी झाँक्रीलाई गरे आफ्नै नेता-कार्यकर्ताले बहि’स्कार !
Nextसुनसान छ तनहुँ प्रहरी कार्यालय, लाखापाखा लागे युट्युबर !
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता, एमसीसीमा सहयाेग गर्न देउवाकाे आग्रह !